Thola uhlobo lweBorzoi: Inja ecishe ifane ne-greyhound | Izinja Umhlaba
Izinhlobo zezinja zeBorzoi
Inja yaseBorzoi yaziwa nangokuthi I-Russian greyhound yokuzingela noma i-Russian greyhound, futhi ifakiwe phakathi kwezinhlobo zezinja zaseRussia ezijabulela udumo nokwamukelwa okukhulu, ngenxa yokuhlonza kwayo okukhulu namasiko aleli zwe.
Lolu hlobo lwenja kungenzeka lukweleta ubuhle balo kanye nenani elithile lokuthi yathuthukiswa ngqo ngabakwa-tsars abakhulu. Okulandelayo uzofunda okwengeziwe ngalolu hlobo lwenja.
1 Umsuka wohlobo lweBorzoi
Umsuka wohlobo lweBorzoi
Ngaphandle kokungabaza, lapho sikhuluma ngesiko nomlando waseRussia, Kuphoqelekile ukukhuluma ngalolu hlobo lwenja, okwathi ngenxa yokuxhumanisa nabasars kwacishe kwaphela nya, ngemuva kokuwa kobukhosi benkosi.
Lesi isizukulwane esesibe khona ngaphezu kwamakhulu ayisishiyagalolunye eminyaka. Ngokwalokho osekuvele kubhaliwe ngekhulu le-XNUMX, lezi zinhlobo zazikhona zihamba nezikhulu zangaleso sikhathi kanye nezibalo ezazivelele njengoPeter the Great noma uTourgeniev.
Ukuthandwa kwayo kwakungangokuthi kwakukhona ngisho nekennel ephethwe nguDimitri Valtsev noGrand Duke Nicolai Nicolaevitch, ebizwa nge- "Perhinskaya Okhota". INdlovukazi uVictoria yaseNgilandi nayo iphakathi kwabantu abakhulu ukuthi wayenezinja zakhe eziseceleni zalolu hlobo, azithola njengesipho.
Ngokuhamba kwesikhathi amaBorzoi ayesaziwa kakhulu futhi ehlonishwa ngejubane lawo elikhulu lokugijima namakhono abo okuzingela, isakaza ubukhona bayo kulo lonke elaseYurophu kanye naseMelika.
Ama-specimens ahlukaniswa ngosayizi wawo omkhulu, empeleni i-FCI ibahlukanisa phakathi kweqembu le-10, esigabeni 1 lapho "ama-sightsounds ngezinwele ezinde noma ezi-wavy”. Ukuthungwa kwalo mncane kodwa kunamandla, kunqunyelwe okukunikeza ukubukeka okuhle nenhle.
Zingezamathambo aqinile hhayi amakhulu futhi uma kwenzeka ezesifazane ziqhelelene kancane kunabesilisa. Kokubili ikhanda lincane kakhulu, lincane futhi livulekile, ingcindezi ye-naso-frontal imakwe kancane bese iphelela ekhaleni elihambayo futhi elilinganayo.
Amazinyo amhlophe, makhulu ngokulunywa kwesikele, zakhiwe ngomhlathi oqinile. Amehlo abo makhulu, imvamisa abe-hazel ngombala kodwa futhi anombala onsundu, futhi azwakala kahle.
Ngokuphathelene nezindlebe, lezi zihlukaniswa wubuncane bazo, ukuhamba kwazo futhi ngoba zikhomba emuva, kuyilapho intamo yinde futhi izacile okungesinye isici esengeza ubuhle ebuhlotsheni kanye nasemalungeni alinganayo kodwa anemisipha. Umsila umise okwe-saber, mncane, futhi imvamisa ulenga phansi, yize uma unyakaza uyaphakama.
Asikwazi ukushiya ngaphandle incazelo yengubo yalolu hlobo oluvelele lwenja, oluvelele lona ukuxegisa, ubushelelezi nokuqina, lapho singabona khona ama-curls amafushane emvelo kwezinye izingxenye zomzimba lapho izinwele ziyichibi eliningi, kanti ekhanda izinwele zimfushane futhi zi-satin. Endaweni yentamo le jazi liba ngama-wavy amaningi futhi liyanda futhi litholakala ezinhlanganisweni ezinhlobonhlobo zombala, Ngaphandle kwamathoni kashokoledi nokuluhlaza okwesibhakabhaka.
Ngokwaziwa, lezi zinja zingachazwa njenge izibonelo ezizolile ezinomlingiswa olinganiselayo, kepha lokhu kuthonywa kakhulu yimfundo enikezwe njengoba iyidlwane, ngakho-ke ekugcineni izoyenza iguquke kakhulu.
Imvelo yazo yokuzingela yenza lezi zinja zibe nokusabela okuvuselelayo ikakhulukazi, okungakafiki futhi okusheshayo ngezikhathi ezithile. Ku-nucleus yomndeni basondelene kakhulu futhi bayabathanda abaphathi baboManje, ubudlelwano ongahle ube nabo nabantu besithathu nezinye izilwane kuzoncika kakhulu ekutheni bakhuliswe kanjani nokuthi kwenziwa inqubo enhle yokuxhumana nabantu.
Lesi sigaba sazo zonke izinja sibalulekile ukuqiniswa ngokuhlangenwe nakho okuhlukahlukene, konke okuhle, ukuze isilwane sijabulele isimilo esihle esigabeni saso sokukhula futhi wazi kahle imvelo yonke.
Ekuqaleni, IBorzoi ingagcinwa kakhulu kubantu ongabazi, kepha uma bekhona ufunde kahle futhi benenhlalo bayakwazi ukuxoxa ngaphandle kwezinkinga. Ngokunjalo, banamandla okuzivumelanisa nezinhlobo ezahlukahlukene zemindeni, kepha-ke, bakhululeke ngokwengeziwe nalabo abanolwazi ngezinja ezinendlela yokuphila ezimele kakhulu, esebenzayo futhi nakanjani enomlingiswa ohluke kakhulu njengalolu hlobo.
Uboya bungezinye zezinto ezihlaba umxhwele futhi kudinga ukunakekelwa okujwayelekile, lokhu kuhlobene nokuxubha okufanele kwenziwe phakathi kokuphindwe kabili noma kathathu ngesonto kusukela ngale ndlela ijazi lihlala lihle, liphilile futhi lingenamafindo.
Lolu hlobo lwezinwele lunakekelwa kahle ngenkathi yokuchitheka ngebhulashi lensimbi, kulesi sigaba ukuxubha kuncishiswa kube kanye ngesonto. Isikhathi esisele kusetshenziswa ibhulashi lekhadi elithambile noma okukhethekile ukuqeda amafindo.
Ngesikhathi sokugeza khumbula ukusebenzisa imikhiqizo (imoto ne-conditioner) ngezinja, lesi sakamuva sisiza ijazi ukuthi lihlale lisilika. Kunconywa ukuwageza kanye ngenyanga noma ngisho njalo ezinyangeni ezimbili.
Usayizi wayo omkhulu nokwakhiwa kwemisipha kudinga inqubo ejwayelekile yokuzivocavoca nsuku zonke, okuyi ungakwazi ukumboza ngezinyawo ezimbili noma ezintathu usuku ngalunye ezihlala okungenani imizuzu engama-30 ngasikhathi, njengoba kuyisilinganiso esiphansi abasidingayo ukugcina imisipha yabo ihambisana.
Kodwa futhi, le nqubo ivumela ukuhogela kwakho ukuthi kuhlale kusebenza, ozihlanganisa nezinye izinja nakho konke okumzungezile futhi uzikhulula naye, kubalulekile ukuthi unikele esinye sezikhathi zalokhu kuhamba ekudlaleni imidlalo nakwezinye izivivinyo.
Khumbula ukuthi ukufunda kulula futhi akuhlukumezi kangako uma usebenzisa ukuqinisa okuhle nge-borzoi futhi kufanele ugweme ukujeziswa ngazo zonke izindlela. Ukulawulwa kwezilwane ngezikhathi ezithile kubalulekile kanye nokuqapha uhlelo lwakho lokugoma, ngakho-ke lolu hlobo lujwayele lezi zifo ezilandelayo:
I-valve ye-Tricuspid dysplasia.
I-Gastric volvulus dilatation syndrome.
Ukuqhubekela phambili kwe-retrophy retrophy.
Ukunakwa kwezemfundo kubaluleke kakhulu futhi kufanele iqale kusukela lapho ingumdlwane, iqale ngokuhlangana nezinye izilwane ezinjengabantu nezindawo ezahlukahlukene. Konke okufeza kulesi sigaba sokuqala kulolu daba kuzoba yinto ebalulekile esikhathini esizayo senja, ukugwema ukuvela kwezinkinga zokuziphatha okunzima kakhulu ukuzelapha esigabeni sabantu abadala.
Lapho sebekhulile, sekuyisikhathi sokuba ubafundise amaqhinga okulalela Ezilula njengokulala phansi, ukuhlala phansi, ukuphendula ucingo, ukuthula, okuzosiza ukuxhumana nokuxhumana nawe njengomfundisi wazo futhi kuzokusiza ukulawula kahle inja lapho ungekho ekhaya.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izinja zizala » Izinhlobo zezinja zeBorzoi
Ukuzala Kwezinja ZaseJapan
IProject Pepo, izinja ezilwa nodlame lwasekhaya